बिचार/ब्लग | Metroinfosys Breaking News
भरतपुर महानगरमा एमालेले गरेका १२ गल्ती
भरतपुर महानगरपालिका देशकै मध्यभागमा रहेको र अनगिन्ती सम्भावनाहरू भएको महानगरपालिका हो । अझै यसलाई ‘भविश्य नभत्...
यसरी गरौं निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको बहसमा एउटा क्षोर छ, नयाँ संविधान लेखेपनि पुरानै ०४७ को संविधानले जसरी नै निर्वाचन...
on: August 10, 2017 In: बिचार/ब्लगNo Comments
भरतपुर महानगरपालिका देशकै मध्यभागमा रहेको र अनगिन्ती सम्भावनाहरू भएको महानगरपालिका हो । अझै यसलाई ‘भविश्य नभत्किएको’ महानगरपालिकाका रुपमा लिन सकिन्छ ।
भूगोल, बसोवास, जनसंख्याको ‘कम्पोजिसन’ प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको उपलब्धता आदि कारणले भरतपुरलाई भनेको जस्तो आकारमा ढाल्न सकिन्छ । सम्भवतः भरतपुर नै अति छोटो समयमा नगरपालिकाबाट उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका बन्ने भाग्यमानी शहर हो ।
भरतपुर महानगरले पहिलो मेयर पाउँदै थियो । तर, यसवीचमा के-के घटनाहरू भए, त्यो सबैलाई विदितै छ । भरतपुर महानगरमा कांग्रेस र माओवादीको गठवन्धन थियो, एमालेका बिरूद्धमा । कांग्रेस र माओवादीको मतलाई जोड्दा एमालेको सिँगौरीले केही लाग्थेन । तर पनि एमाले कांग्रेस-माओवादी गठवन्धनलाई चिर्दै जित हात पार्ने दाउमा थियो । कांग्रेसका मेयर उम्मेदवार दिनेश कोइरालाको उम्मेदवारी फिर्ता गराउने कामले कांग्रेसभित्र पैदा भएको आक्रोशको ज्वालामा रोटी सेक्न एमालेका लागि सहज वातावरण बनेको थियो ।
चितवन जिल्लाका लागि खासै परिचित नरहेकी रेणु दाहालका अघिल्तिर एमाले उम्मेदवार देवी ज्ञवालीको उचाइ निकै अग्लो थियो । एमालेको संगठन भरतपुर महानगरमा मजबुद थियो । क्षेत्र नं ५ बाट भरतपुर महानगरमा मिसिएका साविकका ५ गाविसहरु एमालेका लागि सहज थिए । तर, यति हुँदाहुँदै पनि महानगरमा एमाले पराजित बन्यो कसरी ? कहाँ कहाँ चुक्यो एमाले ? यस्ता प्रश्नहरूको घोत्लिएर एमाले वृत्तमा समीक्षा हुन जरुरी छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाको बैशाख ३१ गते भएको निर्वाचनको मतगणनाका क्रममा वडा नं १९ को मतपत्र माओवादी कार्यकर्ताले च्याते । ७८४ मतको अग्रता लिएर वडा नं १८ बाट १९ मा प्रवेश गरेका ज्ञवालीले वडा नं १९ को १८ सय मत गणना गर्दा जम्मा ५१ मत मात्रै ‘लस’ गरेका थिए । उनीसँग ७३३ मतको मात्रै अग्रता बाँकी थियो । १९ नम्वर वडाको मतगणना गर्न करीव १ हजार बाँकी थियो । थप एक हजार मतमा अधिकतम १ सय मत नै देवीले तिर्न परे पनि वडा नं १९ पार गर्दा उनको अग्रताबाट बढीमा १५० मत घट्थ्यो । ६३४ मत उनीसँग अग्रतामा कायम हुन्थ्यो । यो मत वडा नं २० को गणनामा जितका लागि पर्याप्त थियो । उनले वडा नं २० मा जम्मा ४२४ मत तिरेका छन् । २ सय प्लसमा उनको जित लगभग निश्चित थियो ।
तर, मतपत्र च्यातिनु देवीका लागि दुर्भाग्य बन्यो । तैपनि मतपत्र च्यातिएको घटनाक्रमको प्रकृया गुजारेर पुनः निर्वाचनमा जाँदा पनि देवी ज्ञवालीले जित्न सक्ने आधार थिए । तर, २०३ मतबाट देेवी ज्ञवालीलाई पराजित हुनबाट जोगाउन सक्ने अवस्थामा एमालेले केही कमी कमजोरी गर्‍यो ।
आखिर एमाले कहाँ-कहाँ चुक्यो ? यसमा केही चर्चा गरौं ।
१. उम्मेदवारी चयनमा कमजोरी
एमालेको नवौं जिल्ला अधिवेशन गएको मंसिरमा भएको थियो । एमालेभित्रका स्वाभाविक दुई गुटको प्रतिस्पर्धा अधिवेशनमा भयो । एमालेभित्रको माधव नेपाल समूहले जिल्ला अधिवेशनमा क्लिन स्वीप जस्तै गर्‍यो । पार्टी सचिव र २ सदस्य बाहेक सबै पदाधिकारी र सदस्य माधव नेपाल समूहका विजयी भए । पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको समूह पराजित भयो ।
गुटगत रुपमा बाँडिएका कार्यकर्ताहरु संग्लिन केही समय लाग्यो । तर, स्थानीय निर्वाचनका सन्र्दभमा केही स्थानबाहेक एमालेभित्र त्यस्तो गुटवन्दी देखिएन । केपी ओलीले जसरी पनि एमालेले जिताउने अभियान छेडेका कारण पराजित नै भए पनि केपी ओली समूह निर्वाचनमा जिल्ला नेतृत्वलाई सहयोग गरेर नै अघि बढ्यो ।
जस्तै-माडी नगरपालिकाका मेयर आकांक्षी श्याम बिष्टको नाम जिल्ला कमिटीले प्रदेश कमिटीमा पठाइएन । नगरपालिकाहरुको मेयरको टुंगो प्रदेश कमिटीले लगाउने पार्टीको निर्णय नै थियो । जिल्ला कमिटीले नारादमणि पौडेलको नाम मात्रै पठायो । तर, बलिया आंकाक्षी उम्मेदवार बिष्ट विना हिच्किचाहट र गुनासो जिल्ला पार्टीको निर्णयलाई स्वीकार्दै भोलिपल्टबाट नै पौडेलको प्रचारमा खटिए । बिष्ट केपी ओली समुहका नेता हुन् भने पौडेल माधव नेपाल समूहका । पूर्वका सबैजसो नगरपालिकाका मेयर र उपमयेरमा जिल्ला नेतृत्वले गुटगत व्यवस्थापन गरेको थियो । तर, महानगरका केही वडाहरूमा भने गुटको हावा बढी लाग्यो ।
सर्वसम्मत भएका वडा बाहेक अन्यत्र तजविजका आधारमा वडाध्यक्षहरूको चयन गरियो । जस्तो कि, तत्कालीन नारायणी नगर कमिटीका अध्यक्ष वडाध्यक्ष उठ्छु भन्दा पनि टिकट पाएनन् । अन्यत्र केही वडामा पनि सन्तुलन मिलाइएन ।
एमालेको गढ मानिएको साविक कविलास गाँउपालिकाका हाल २९ नम्वर वडामा कांग्रेस-माओवादीको गठवन्धन बन्यो । कांग्रेसबाट वडाध्यक्ष उठेका सूर्यबहादुर गुरुङ एमालेबाट वडाध्यक्ष बन्न चाहान्थे । तर, स्थानीय चल्तापूर्जा नेता धनकीलाल गुरूङले मानबहादुर रानामगरलाई वचन दिएको हुनाले अरूलाई बनाउन नसकिने अडान लिए । धनकीलालले बोलेपछि जिल्ला नेतृत्वले दायाबाँया गर्न सक्ने अवस्था नै रहँदैन । जिल्लाले यताउता चलाएको भए वडामा एमालेको पराजय पक्का थियो । धनकीलाललाई सम्झाएर सूर्यबहादुर गुरूङलाई उम्मेदवार बनाएको भए न त कांग्रेस-माओवादी गठवन्धनकै सम्भावना थियो, नत कांग्रेसले टक्कर दिने अवस्था नै आउथ्यो । त्यहाँ जम्मा ४२ मतले एमालेले वडाध्यक्ष जित्यो । जुन फरक अलि ‘च्यातिन’ आवश्यक थियो । यही कारण वडा नं २९ बाट एमालेले सोचेजस्तो मत ल्याउन सकेन ।
त्यसैगरी वडा नं २५ मा वडाध्यक्ष बाहेकका सबै सदस्य एमालेले जितेको छ । महानगरका २९ मध्ये १४ वटा वडा जितेको एमालेलाई महानगरपालिकामा बहुमत पुग्नबाट यही २५ नं वडाले रोक्यो । उम्मेदवारी चयनमा नेतृत्वले विवेक नपुर्‍याउँदा र स्थानीय रुपमा पार्टी कमिटीलाई विश्वासमा लिन नसक्दा एमालेले आफैंभित्रबाट धोका पाएको छ ।
२. माओवादीलाई वडाध्यक्ष छाड्नु
भरतपुर महानगरको मेयर र उपमेयरमा कांग्रेस-माओवादीले गठवन्धन गरेका थिए । तर अचम्म के थियो भने, महानगरको वडा नं २६ मा चाहिँ एमाले र माओवादीको गठवन्धन भयो । माओवादीका चुतर खेलाडी मानिएका ज्ञानप्रसाद खनालले ‘फस्ल्याङ फुस्लुङ’ पारेर एमालेका वडाध्यक्ष उम्मेदवारलाई उम्मेदवारी फिर्ता गर्न लगाए । ४ जना वडा सदस्य एमालेलाई दिने र वडाध्यक्षमा माओवादीका उनै उम्मदेवार ज्ञानप्रसादलाई समर्थन गर्ने सहमति भयो । यसरी २६ नम्वर वडामा ‘मियो बिनाको दाइ’ भयो ।
यो वडामा एमालेको नेतृत्व गरेर जनताका वीचमा मेयर र उपमेयरलाई भोट मागिदिने मान्छे नै भएन । एमालेलाई खनालले यस्तो जालमा हालिदिए कि एमालेका सबै मतदाताले खनाललाई भोट हालेर जिताए । तर, माओवादीले मेयरमा भने देवी ज्ञवालीको साटो रेणु दाहाललाई नै भोट हाले । एमालेले गरेको यो भन्दा कच्चा काम अरु हुनै सक्थेन ।
यसरी माओवादी उम्मदेवारसँग सहमति गरेर वडाध्यक्ष त्याग्ने भूपाल कँडेललाई अहिलेसम्म एमाले नेतृत्वले कारवाही गरेको छैन । एमाले जिल्ला उपाध्यक्ष तेजेन्द्र खड्काले जिल्ला नेतृत्वको सहमति बेगर उम्मेदवारी फिर्ता लिइएको बताउँदै आएका छन् । ‘यो समीक्षाको बिषय बन्यो,’ एमाले जिल्ला उपाध्यक्ष खड्का भन्छन्, ‘समीक्षापछि दोषीमाथि कारवाही हुन्छ ।’
एमालेका लागि २६ नम्बरमा वडाध्यक्ष माओवादी वा कांग्रेस जसले जितेपनि खास अर्थ थिएन । मेयरमा कसरी बढी भोट झार्ने भन्नेमा उसले ध्यान दिनुपर्ने थियो । एमाले जिल्ला नेतृत्वले वडाध्यक्षमा कांग्रेसलाई समर्थन गरिदिने र कांग्रेसले मेयरमा एमालेलाई मत दिने सहमति जिल्ला नेतृत्वले गर्न सक्थ्यो । तर, त्यो गरेन वा गर्न चाहेन । यो एमालेको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी रह्यो ।
रेणु दाहालले वडा नं २६ बाट मात्रै १५४९ मत थपिन् जहाँबाट देवीले ८९६ मत मात्रै प्राप्त गरे । र, यहीँबाट ६५३ मतले एमाले पछि पर्‍यो । यहाँबाट एमालेले मेयरमा कम्तिमा पनि दुई चारसय सय मत सजिलै थप्न सक्थ्यो । तर, माओवादी वडाध्यक्ष उम्मेदवारको पछि लाग्दैमा एमालेका स्थानीय नेतालाई ठिक्क भयो । पार्टी कमाण्ड सम्हाल्ने मान्छे नै भएन ।
३. वडाध्यक्ष जितेकै ठाँउमा देवीलाई दण्ड
एमालेले महानगरका वडा नं २२ र २३ मा जित्यो । तर, यी जितेका वडाबाट मेयरलाई मत प्लस हुनुपर्ने मा देवीले उल्टै त्यहाँ मत तिरेका छन् । वडा नं २२, २३ बाट एमालेले प्यानलसहित वडाध्यक्ष जितेको छ, तर १५३ मत मेयरमा रेणुलाई तिर्नुपरेको छ, जसले देवीको अग्रता घटाउन सहयोग गर्‍यो ।
आफूले प्यानलै जितेको वडा नं २३ मेयरमा एमालेको ८७ मत कम पाएको छ । जवकि वडा नं २८ मा एमालेले चुनाव हार्दा पनि ४ सयभन्दा बढी मत देवी ज्ञवालीलाई प्राप्त भएको थियो । यसको अर्थ के हो भने एमालेका वडाध्यक्षहरूले आफूलाई केन्दि्रत गरे, देवीका लागि मत माग्न जोड गरेनन् । देवीलाई मत माग्न जाने समय पर्याप्त समय थिएन । वडाध्यक्ष वडाध्यक्ष मात्रै बने, देवीका कार्यकर्ता बन्न सकेनन् ।
४. अपेक्षा गरिएका वडाबाट कम मत आउनु
भरतपुर महानगरमा एमालेले वडा नं १, २, ३ र ४ बाट मेयरमा वडाध्यक्षले भन्दा बढी नै मत पाएको छ । वडा नं १ कांग्रेसले जितेपनि देवीले एमाले वडाध्यक्षले भन्दा ३५० मत पाए । देवीले वडा नं २ बाट विजयी एमाले वडाध्यक्षले भन्दा दोब्बर बढी, १९४४ मत बढी पाए । तर, एमालेका गढ भनिएका वडा नं १०, १२ र १६ बाट देवीलाई अपेक्षाकृत मत आएन ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, रेणु दाहाल र एमाले मेयर उम्मेदवार देवी ज्ञवालीको घर रहेको वडा एउटै हो-वडा नं ४ । तर, यो बडाबाट देवीले जुन अनुपातमा बढी मत ल्याउने सोचेका थिए, त्यति आएन ।
वडा नं १० मा देवीले वडाध्यक्षको भन्दा जम्मा १२० मत मात्रै बढी पाए । बढी मतको फरकले जित्ने भनिएको वडा नं २९ मा एमाले उम्मेदवार मानबहादुर रानामगरले जम्मा ४२ मतको फरकले प्यानलसहित चुनाव जिते । तर, यहाँबाट पनि देवी ज्ञवालीलाई अपेक्षा गरेअनुसारको मत आएन । वडाध्यक्ष रानाको भन्दा जम्मा ९७ मत मात्रै देवीको बढी आयो । यहाँबाट २ सय मतको फरक हुनुपर्ने थियो ।
त्यस्तै, वडा नं ६ मा एमाले अति नै कमजोर देखियो । यहाँ एमाले तेस्रो भयो । वडा नं ७, ८ र ९ बाट पनि देवी ज्ञवालीको पक्षमा आशातीत मत आएन । पुनं मतदान भएको वडा नं १९ मा पनि वडाध्यक्षको भन्दा केही बढी मत देवीलाई कम आयो ।
महानगरका वडा नं १०, ११, १२, २८ र २९ बाट महानगरका पश्चिमी वडाहरु -कांग्रेस बाहुल) मा जाँदा कम्तिमा पनि देवीसँग ५ हजारको अग्रता हुनुपर्दथ्यो । तर, त्यो अग्रता जम्मा ३८३३ मत सीमित बन्यो, जसले गर्दा देवी २०३ मतले पराजित बन्न पुगे ।
५. कांग्रेसको असन्तुष्टिलाई ‘क्यास’ गर्न नसक्नु
सुरुमा एमालेमाथि कांग्रेसको सहानुभूतिको मत थियो । र, त्यो मत स्वतः प्राप्त हुने एमालेको विश्वास थियो । कांग्रेसको असन्तुष्टिमा खेल्ने योजना एमालेसँग खासै थिएन । केही असन्तुष्टहरु फर्किएर रेणु दाहाललाई भोट माग्न थाले ।
जस्तो कि कांग्रेसबाट मेयरका उम्मेदवार बनेका दिनेश कोइरालाले समेत वडा नं ६ मा पुगेर रेणुका पक्षमा मत मागे । अघिल्लोदिनसम्म कुनै पनि हालतमा माओवादीसँग एकता गर्न हुँदैन भनेर मुर्मुरिएका कांग्रेसका जिल्ला नेताहरु समेत गठबन्धनकै पक्षमा लागे ।
एमालेले आफ्नो जितका लागि उनीहरुलाई गठवन्धनका विरुद्धमा खडा गराइरहन जरुरी थियो । एमाले यसमा पनि चुक्यो । उनीहरुलाई कहाँ प्रयोग गर्ने नीति एमालेले बनाउन सकेन ।
६. निष्प्रभावी महानगर कमिटी
एमालेले जिल्ला पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भरतपुर महानगर कमिटी बनाएको थियो । यो कमिटी जति जम्बो थियो, काम भने त्यति जम्बो गर्न सकेन ।
निर्वाचनको योजना र रणनीति निर्माण तदनुसारको जिम्मेवारी प्रदान र त्यसको अनुगमन र मूल्याङकन, कमीकमजोरी औंल्याएर सुझाव लिने काम भएन । ‘राइट म्यान राइट प्लेस’ को अवधारणा लागु गरिएन ।
निर्वाचनका लागि पार्टी नेता कार्यकर्ता त लागेका थिए, तर योजना व्यवस्थित थिएन । महानगर कमिटीको सचिवालयले बैठक राखेर योजना निर्माण गर्न जिम्मेवारी वाडफाँड गर्न असफल बन्यो । जिल्ला पार्टी प्रचार विभागले एउटा पनि बैठक राख्न सकेन । बनेको विभाग निस्प्रभावी रह्यो ।
७. राप्रपासँग तालमेल नगर्नु
कांग्रेस र माओवादी गठवन्धनका वीचमा तालमेल भएपछि एमालेले भरतपुर महानगरपालिकामा राप्रपासँग तालमेल गरेको भए वडा नं १९ मा पुन मतदान भए पनि एमाले पराजय हुने सम्भावना कम हुने थियोे ।
राप्रपाका ७ हजार मत मध्ये २ हजार मत नै एमालेको पक्षमा आएको भए पनि एमालेको जित सहज थियो । तर, एमालेको भरोसा पनि उपमेयरमा भन्दा मेयरमा नै थियो । मेयरमा फराकिलो अग्रता देवीको कायम हुने अवस्था भएको भए माओवादीले मतपत्र च्यात्ने दुस्साहस पनि गर्न सक्ने अवस्था आउने थिएन । या च्याते पनि पुन मतदान हुँदा एउटा वडाले देवीको अग्रतालाई रोक्न सक्ने थिएन ।
राप्रपाका जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका मेयरका उम्मेदवार बदि्र तिमिल्सिना उपमेयरको उम्मेदवार बन्न तयार थिए । तर, यसबारे एमालेले गृहकार्य नै गरेन । काठमाण्डौं महानगरपालिकामा राप्रपासँग तालमेल गर्न तयार भएको एमाले भरतपुरमा भने अनिच्छुक देखियो ।
८. कार्यकर्ता परिचालन सही ढंगले गर्न नसक्नु
एमाले कार्यकर्ताहरु अरु दलका भन्दा व्यवस्थित देखिन्छन् । सांगठनिक संरचनामा व्यवस्थित भएर बस्ने जमात अन्य दलसँग भन्दा एमालेसँग बढी छ । दुई प्रमुख दल कांग्रेस माओवादी गठवन्धनले आथ्थु आथ्थु पार्दा समेत त्यसको असरलाई कम गराउन यही कार्यकर्ता पंक्ति रक्षाकवज बन्ने गरेको छ ।
तर, एमालेले चितवनमा कार्यकर्ता परिचालन सही ढंगले गर्न सकेन । पार्टी भित्रका आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा र गुटगत लडाईमा तँछाडमडाड गरेर उत्रिने कार्यकर्ता र बनाइने योजना महानगरमा बन्न सकेन । परिभाषित जिम्मेवारीहरु मसिनो गरी निर्वाह गर्न गराउन नेतृत्व चुकेको देखियो ।
९. सर्वोच्च अदालत जानु
वडा नं १९ को मतपत्र च्यातेपछि निर्वाचन आयोगले पुनं निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, यो निर्णयका विरुद्ध एमाले सर्वोच्च अदालतमा गयो ।
सर्वोच्चले समय गुजारेर रेणु दाहाललाई वडा नं १९ मा चुनावी तयारी गर्ने मौका दियो । एमालेले नै अदालत गुहारेपछि सर्वोच्च अदालतले रेणु दाहाललाई खेल्ने प्रशस्त समय दियो । सर्वोच्च अदालत जान छाडेर तत्कालै चुनावमा गएको भए मतपत्र च्यात्नेहरुका विरुद्धको ‘सेन्टिमेन्ट’ देवीलाई प्राप्त हुन सक्थ्यो ।
तर, एमालेले बुझेको सत्य के थियो भने सर्वोच्च अदालतले पुनं मतदानका लागि फैसला नगर्ला । पुनः मतदानमा जाँदा विपक्षीहरू खेल्ने र जे पनि हुन सक्ने भएकाले जीत सुनिश्चित भएको मतगणना नै एमालेका लागि सजिलो र सहज थियो ।
तर, निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि माओवादी र कांग्रेस नेताहरु मत माग्न भन्दै वडा नं १९ मा ओइरिन थाले । रेणु दाहाल यहीँ डेरा जमाएर बसिन् । तर, एमालेले भने सर्वोच्चमा पुनं मतगणनाका लागि मुद्दा हालेकाले पुनंमतदानका लागि मत माग्न जान नैतिक रुपमा सकेन ।
योवीचमा कांग्रेस-माओवादीले आपसमा भएका असन्तुष्टिहरुलाई मिलाए । जसले जे भनेर, जो लगाएर फकाएर हुन्छ, त्यही गरेर फकाए । एमालेले कांग्रेसका विरुद्ध समेत केही प्रचार छेड्यो र मतदातालाई चिढ्याउने काम गर्‍यो, जसको नकारात्मक असर पर्‍यो ।
१०. वडा नं १९ एमालेका लागि प्रतिकुल हुनु
पश्चिम चितवनका केही वडाहरुमा एमालेको सांगठिनक आधार कमजोर छ । तर, प्रभाव बढ्दो छ । यहाँ माओवादी पनि कमजोर छ । कांग्रेसबाट खोस्न सकिने मतका आधारमा जित निर्धारण हुने हो । भरतपुर महानगरको यो विषय यस्तो वडामा लगेर फसाइयो जुन एमालेका लागि प्रतिकुल थियो । वडाध्यक्षका एमाले उम्मेदवार प्रकाश तामाङ युवा थिए र सशक्त थिए । उनी भएकै कारण देवीका लागि यस वडाबाट पहिलो चरणमा अपेक्षा भन्दा धेरै मत आएको थियो । ७८४ को अग्रता रहँदा अन्य वडामा जस्तै मत तिर्नुपरेको भए देवीको जीतको सम्भावना वडा नं १९ मै सकिन्थ्यो । जीतको सम्भावनालाई जीवित यसै वडाले राखेको हो ।
तर, जब पुनं निर्वाचनको निर्णय भयो, त्यसपछि कांग्रेसभित्रको अन्र्तद्वन्द्व र असन्तुष्टिहरूलाई मिलाउने काम भयो । सुरुमा एमालेलाई सहयोग गरेका स्थानीय कांग्रेस नेता आशबहादुर तामाङलाई निगरानी गरियो र उनलाई विभिन्न आश्वासन दिएर गठवन्धनकै पक्षमा हिँडाउने काम गरियो ।
सांगठनिक आधार कमजोर भएका १७, १८, १९ र २० नम्बर बाहेकका अन्य वडामा गएर यो विषय फसेको हुन्थ्यो भने गठवन्धनले जतिसुकै जे गरे पनि देवी ज्ञवाली २ सय मतान्तरले हार्ने अवस्था आउने थिएन ।
पहिलो चरण र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा एमाले पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित भएकाले मत दिएर थप १ महानगर एमालेको पक्षमा थप्न कांग्रेस कार्यकर्ताले चाहेनन् । एमालेलाई मत दिनु भनेको कांग्रेसलाई थप कमजोर बनाउनु हो भन्ने आम बुझाइ बन्यो । एमालेले महानगरमा जरा गाड्यो भने कांग्रेसका दिन सकिन्छन् भन्ने प्रचार गरियो । त्यसैले कुनै पनि हालतमा एमालेलाई मत नदिने अवस्थामा वडा नं १९ का मतदातालाई पुर्‍याइयो । कांग्रेसका नेताले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाए ।
११. आफ्नै मतको सुरक्षा गर्न नसक्नु
भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं १९ को मतगणना चलिरहँदा माओवादीले मतपत्र च्यात्छन् भन्ने विषय हावासरी फैलिएको थियो । यो विषय एमालेको जिल्ला नेतृत्वलाई पनि रामै्रसँग जानकारी थियो । एमालेको सम्भावित जित र माओवादीको हारभित्र हुन सक्ने सम्भावित घटनालाई रोक्न चनाखो बन्नुपर्दथ्यो, तर बन्न सकेन ।
माओवादीले मतपत्र च्याँत्दै छन् भन्ने सूचना एमालेका नेतालाई पुगिसकेपछि सोही अनुसारको सुरक्षा रणनीति बनाउने र माओवादीका एजेन्टहरु माथि निगरानी बढाउन प्रहरी प्रशासनलाई भन्ने र तोकिएको संख्यामा भन्दा बढी माओवादी कार्यकर्तालाई मतगणनास्थलभित्र प्रवेश गर्न नदिने काम एमालेले गर्नुपर्ने थियो । तर, एमाले एजेन्टहरुले माओवादीकै आडमा बसेर पनि उसका गतिविधिलाई ‘रेकी’ गर्न सकेन ।
मतगणनाका क्रममा अधिकांश समय गणनास्थलमा बसेका एमालेका युवा नेता साकार लामा सम्झन्छन् ‘माओवादीले मतपत्र च्यात्दै छन् भन्ने सूचना मैले मुख्य निर्वाचन अधिकृत, प्रहरी प्रमुख, एमालेका जिल्ला अध्यक्षसहितका नेतालाई पहिल्यै दिएको थिएँ । त्यो अनुसार सर्तकता बढाउन भनेको थिएँ । तर, भन्दाभन्दै घटना भयो, एमालेले रोक्न सकेन, तुरुन्तै केही एक्सन हुनुपर्दथ्यो’ ।
यो सम्भावित घटनाका विषयमा केही सञ्चारकर्मीहरुले समेत प्रहरीलाई जानकारी गराएका थिए । प्रहरीले यसलाई गम्भीतापूर्वक लिएन । डीएसपी स्वंयलाई जानकारी गराइएको थियो । तर, उनले त्यसलाई टारे ।
१२. राज्य सत्ताको दुरुपयोग रोक्न नसक्नु
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्ककमल दाहालकी पुत्री भएकै कारणले रेणु दाहालले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरको टिकट पाएकी हुन् । यही कारणले नै भरतपुर महानगरमा बलियो कांग्रेसले तेस्रो पार्टीका अध्यक्षकी छोरीलाई मेयर पदमा सर्मथन गरेको हो ।
रेणु दाहाल को हुन् भन्ने बारेमा सायदै भरतपुर महानगरका मतदाता परिचित थिए । जसरी पनि रेणु दाहाललाई जिताउनु पर्छ भनेर प्रचण्ड लागेका थिए । कारण उनलाई कांग्रेससँग मिलेर छोरी जिताउनु थियो । उनी सत्तामा थिए । त्यसका लागि राज्य सत्ताको सबै शक्ति भरतपुर केन्दि्रत थियो ।
पछिल्ला समयमा चितवनको भरतपुर केन्दि्रत बजेट यसकै उपज हो । प्रहरी प्रशासनदेखि मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन आयोग सवैतिर प्रभावित पारिएको थियो । विना लगत इष्टिमेट निर्वाचनका बेलामा वडा नं १९ मा पैसा खन्याउने काम गरियो । मतदाताहरुलाई विभिन्न आश्वासन दिने, करोडौं रकम रकमान्तर गरी खर्च गर्ने काम भयो ।
स्थानीय आमा समुहहरु ५ वटाबाट पैसा लिनकै लागि २३ वटा पुर्‍याइए । विभिन्न स्थानीय क्लवहरु, स्थानीय युवाहरु, विभिन्न समूह र संस्थाहरु रकम लिनबाट सायदै बञ्चित थिए । यो सबै हर्कतलाई रोक्न एमालेले चाहेर पनि सकेन वा पहुँच पुगेन जसको कारणले पराजय हुन पुग्यो ।
महानगरमा अब एमालेको भूमिका
एमालेले महानगरको मेयरमा विजयी रेणु दाहाललाई स्वाभाविक मेयर नमान्ने संकेत दिइसकेको छ । एमाले मेयरका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीले रेणुको जितलाई अस्वाभाविक र अप्राकृतिक भनेका छन् । एमालेले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा देवीले भने, ‘अस्वाभाविक जित नभएको भए म आफैंले रेणु दाहाललाई सबैभन्दा पहिले फूलमाला लगाएर बधाइ दिने थिएँ ।’
तर, सपथ ग्रहण कार्यक्रम नै बहिष्कार गरेर रेणु बिरुद्ध एमालेले असहयोगको नीति अख्तियार गर्न शुरु गरेको छ । ध्रुवीकरण बढाएको छ । एमालेले सहज र सरल तरिकाले रेणुलाई यसै छाड्ने अवस्थामा नरहेको जनाउ दिइसकेको छ । वडा नं १० का वडाध्यक्ष अरुण पीडित भण्डारीले एमालेसँगको सहमति, सहकार्यविना वा एमालेलाई अण्डर इष्टिमेट गरेर अघि बढ्न खोजे त्यो दुर्भाग्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
मेयर रेणु दाहालले अब निर्वाचनका तमाम जायज नाजायज घटनाबाट चिढिएको एमालेलाई थप बिच्काउने नभई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्छ । एमालेको पछिल्लो प्रतिक्रिया र भूमिकालाई स्वाभाविक रुपमा लिँदै विषयलाई मथ्थर बनाउने काम दाहालबाट हुनुपर्दछ । प्रचण्डपुत्री भएको र अनेक खालका तागत लगाउन सक्ने खुबी भएको घमण्ड उनीभित्र पलाएमा बाँकी रहेको ४ वर्ष ९ महिनाको अवधि उनका लागि जोखिमयुक्त हुनेछ ।
एमालेले पनि अब सधैं एउटै कुरालाई मात्रै उठाउनु भन्दा सहकार्य गरेर महानगरको विकासका जुटनुपर्छ । महानगरमा जनताको प्रतिनिधि भएर रचनात्मक र सिर्जनात्मक खुवी देखाउनु र भूमिका खेल्नु एमालेका लागि श्रेयष्कर हुनेछ ।
on: August 06, 2017 In: बिचार/ब्लगNo Comments
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको बहसमा एउटा क्षोर छ, नयाँ संविधान लेखेपनि पुरानै ०४७ को संविधानले जसरी नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यो ठाउँ हामीले छोडिसक्यौं । त्यसबेला केन्द्र पछाडिको युनिट जिल्ला थियो, अहिले प्रदेश छ । त्यसैले प्रदेशमा नपुग्दासम्म जिल्लामा पुग्न सकिँदैन, संविधानमा प्रष्ट भाषामा भनिएको छ ।
दोस्रो क्षोर छ, जसले जनसंख्याबाट मात्र गर्नुपर्छ भन्छ । त्यसमा पनि मधेस केन्द्रीत राजनीति गरिरहेका दलहरुले जनसंख्या मात्र भन्नुहुन्छ । त्यसबाट पनि स्पष्ट प्रस्थान अहिलेको संविधानले गरेको छ । अन्तरिम संविधानमा तराईमा जनसंख्याको आधारमा भनिएको थियो । तराई र हिमाल-पहाडलाई अलगअलग इकाईका रुपमा हेरिएको थियो । त्यसैले यो दुबै क्षोरको तर्कबाट हामी समाधानमा पुग्दैनौं ।
हामीले संवैधानिक प्रावधानलाई ध्यानमा राख्नु पर्ने हुन्छ । संविधानमा प्रष्टसग भनिएको छ कि क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानिनेछ ।
अन्तरिम संविधान भन्दा अहिलेको संविधान दुई तीन वटा कुरामा फरक छ । एउटाः अन्तरिम संविधानमा तराईमा जनसंख्याका आधारमा गर्ने भनिएको थियो । त्यो नयाँ संविधानमा छैन । दोस्रोः पहिलेको संविधानमा मूलत जिल्लालाई ध्यान दिइएको छ । अहिले छैन । तेस्रोः जनसंख्यालाई मुख्य आधार र भूगोललाई दोस्रो आधार भनिएको छ । यसकारण पनि यो महत्वपूर्ण छ कि संविधानको पछिल्लो संशोधन यही हो । यसकै आलोकमा अरु धाराहरुको पनि ब्याख्या गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यद्यपि आलंकारिक भाषा पनि अहिलेको संविधानका धारामा पनि छन्, ती सबै अन्तरिम संविधानमा भएकै भाषामा अहिलेको संविधानमा सारिएको हो ।
बाँकी काम गर्न प्रस्थान विन्दु के हो भन्ने हुनसम्छ ? हामी संघीयतामा गइसकेका छौं । त्यसैले प्रदेशहरुको निर्वाचन क्षेत्र संख्या पहिले निर्धारण हुन्छ । त्यसपछि प्रदेशभित्र कुनै पनि जिल्लामा कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र हुनेछ भनिएको छ । यसले कति ठूलो परिर्वतन ल्याउँछ त्यो हेर्नुपर्‍यौं ।
उसो भए कसरी जाने त ? निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विज्ञान होइन, कला हो । राजनीतिक कला पनि हो । भूगोलविद, समाजशास्त्री, कानुनविद्, प्रशासनविद् क्षेत्र निर्धारण आयोगमा राख्ने व्यवस्था हृदयंगम गर्दा भौगोलिक विशिष्टता, यातायात लगायतका पूर्वाधारको अवस्था, बसोबास आदि कुरा समेत ध्यानमा राखेर क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने बुझिन्छ । तर, जहिले पनि कला भन्नासाथ निश्चित उत्तर फेला पर्दैन । सबै मिलाउँदै इम्प्रोभाइज गर्ने हो । सबैभन्दा राम्रो होइन, यति भए पुग्छ भनेर सबैलाई चित्त बुझ्ने समाधान खोज्ने हो ।
संविधान बनेपछि हामी पहिलो पटक संघ र प्रदेशको चुनाव गर्दैछौं । त्यसैले राजनीतिक सम्झौता पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिक पार्टीहरुलाई सहज रुपमा एउटा ठाउँमा लिएर जानुपर्छ । दलहरुका कतिपय कुरा वस्तुगत पनि होलान्, मनोवैज्ञानिक पनि होला । दुबैलाई ध्यान दिएर एउटा सम्झौताको खोजी गर्नुपर्छ ।
यदि हामीसँग पुरानै ढंगको ०४७ को संविधान नै भएको भए कस्तो हुन्थ्यो त भनेर हेरौं । यसरी पुरानौ शैलीबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने हो सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर ३ मा ३३ र सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर ६ मा १२ हुनेछ ।
जिल्लाको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्दा हुने परीणाम
प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र
अहिले जिल्ला छँदै छैनन्, प्रदेशहरु मात्र छन् भन्ने र जनसंख्याको आधारबाट मात्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा कस्तो होला ? यसरी हेर्दा सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर ३ मा ३४ र सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर ६ मा ११ हुनेछ ।
जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्दा हुने परीणाम
प्रदेश जनसंख्या निर्वाचन क्षेत्र
१ ४५,३४,९४३ २८
२ ५४,०४,१४५ ३३
३ ५५,२९,४५२ ३४
४ २३,९७,२७४ १५
५ ४५,०५,९१४ २८
६ १५,७०,२५७ ११
६ २५,५२,५१७ १६
यो दुबैलाई रेफरेन्स प्वाइन्टमा राख्नसक्छौं ।
तर, हामीले अब प्रष्ट रुपमा दिमागमा राख्नुपर्छ कि संविधानमा जनसंख्यालाई र भूगोल दुबैलाई आधार भनेका छौं । जनसंख्या र भूगोललाई बराबरी भार दिने हो भने के होला ? हाम्रो जनधनत्व झण्डै १८० प्रति वर्गकिमी छ । त्यसैले एरियालाई १८० ले गुना गर्ने र योगफललाई जनसंख्यासँग जोड्ने हो भने जनसंख्या र भूगोलले बराबरी प्राथमिकता पाउँछ ।
यसरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने हो भने सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर ७ मा १९ र सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर १ मा २९ हुन्छ ।
जनसंख्या र भूगोललाई बराबरी प्रातमिकता दिँदा हुने परीणाम
प्रदेश जनसंख्या क्षेत्र (वर्ग कीमी) निर्वाचन क्षेत्र
१ ४५,३४,९४३ २५९०५ २९
२ ५४,०४,१४५ ९,६६१ २२
३ ५५,२९,४५२ २०,३०० २८
४ २३,९७,२७४ २१,८३८ २०
५ ४५,०५,९१४ १९,२२६ २५
६ १५,७०,२५७ ३०,७१२ २२
७ २५,५२,५१७ १९,५३९ १९
तर, संविधानमा जनसंख्यालाई मुख्य आधार र भूगोललाई दोस्रो आधार मानिएको छ । यसमा अनुपात कति भन्ने बहस हुनसक्छ । मुख्य आधारलार्इ ६० र दोस्रो आधारलाई ४० भार दिन पनि सकिन्छ । ५१ र ४९ वा ९९ र १ गर्दा पनि मुख्य र दोस्रो आधार मान्न सकिन्छ । तर, संविधानको मर्म र भाव भन्दा पनि बाहिर जानु भएन र समाधानमुखी बाटोमा पनि हिड्नुपर्‍यो ।
हामी यो बहस लामो समयसम्म गरिरहन सक्दैनौं । संविधान अनुसार निर्वाचन गर्नुछ । प्रदेश नम्बर २ बाहेक स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको छ । अब बाँकी चुनाव गर्न राजनीतिक रुपमा स्वीकार्य हुने र संविधानको मर्म अनुसार हुने गरी समझदारी खोजी गर्नुपर्छ । त्यसमा अर्को रेफरेन्स प्वाइन्ट अघिल्लो संविधानसभामा २४० निर्वाचन क्षेत्र पनि हुनसक्छ । यो हेर्न यस कारण पनि आवश्यक छ कि अहिलेको संविधानमा धेरै ठाउँमा जहाँ जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार भनेको छ, त्यो बाहेक अरु सबै धारामा अहिलेको संविधानमा पनि अन्तरिम संविधानको भाषा छ । त्यसैले २४० महत्वपूर्ण रेफरेन्स प्वाइन्ट हुन्छ ।
यसरी हेर्दा सबैभन्दा बढी ४८ निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश नम्बर २ र सबैभन्दा कम १५ प्रदेश नम्बर ५ मा छ । अब २४० बाट १६५ मा जानुछ । १६५ लाई लगभग एउटा समाधान खोजी गर्ने विन्दु दुई तिहाई भन्ठानेर हुने १६० निर्वाचन क्षेत्र बाँड्ने हो भने प्रदेश ६ मा सबैभन्दा कम १० र सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर २ मा ३२ हुन्छ । यसमा बाँकी ५ निर्वाचन क्षेत्र कसरी थप्ने ? यसो गर्दा पूर्णाङ्क नभएका प्रदेशको संख्या निर्धारण पनि गर्नु पर्ने हुन्छ ।
पुरानो २४० निर्वाचन क्षेत्रलार्इ आधार बनाउने आउने परीणाम
प्रदेश २४० निर्वाचन क्षेत्र दुई तिहाई
१ ४४ २९.३
२ ४८ ३२
३ ४५ ३०
४ २६ १७.३
५ ४१ २७.३
६ १५ १०
७ २१ १४
पुरानौ ढंगले जिल्लालाई आधार बनाउँदा के हुन्छ ? प्रदेशको जनसंख्यालाई मात्र आधार मान्दा के हुन्छ ? जनसंख्या र भूगोलको भार बराबरी मान्दा के हुन्छ ? र, २४० को आधारबाट के हुन्छ ? भनेर चार वटा रेफरेन्स प्वाइन्ट फेला पार्‍यौं । यसरी हेर्दा प्रदेश नम्बर १ मा प्राय सबै विकल्पमा २८ वा २९ देखिन्छ । प्रदेश नम्बर ३ मा २८ देखि ३४ सम्म देखिन्छ । प्रदेश नम्बर ४ मा १५ देखि २० देखिन्छ भने ५ मा २५ देखि २८ र प्रदेश नम्बर ७ मा १४ देखि १९ देखिन्छ । तर, प्रदेश नम्बर २ र ६ को हकमा क्षेत्रको संख्यामा अन्तर निकै फराकिलो छ ।
प्रदेश नम्बर २ मा जनसंख्या निकै बढी ५४ लाख छ भने भूगोल १० हजार वर्गकिमी भन्दा कम छ । प्रदेश नम्बर ६ मा जनसंख्या १६ लाख हारहारी छ तर, भूगोलिक रूपमा ठूलाठूला जिल्ला भएकाले ३० हजार वर्गकिमी भन्दा बढी छ । माथि चर्चा गरिएका चार रेफरेन्स प्वाइन्ट हेर्दा प्रदेश नम्बर २ मा २२ देखि ३३ सम्म र प्रदेश नम्बर ६ मा १० देखि २२ सम्म निर्वाचन क्षेत्र देखिन्छ । यो दुई क्षोर समेत ध्यानमा राख्दै मध्यविन्दुमा समाधान खोज्नु पर्दछ, सबैले भनेजस्तै नभएपनि चित्त बुझाउन सक्ने खालको समाधान खोजी गर्नुपर्छ ।
त्यसैले मुलत २४० लाई १६५ बनाउँदाको आधार छेउछाउ पुग्ने कोशिश गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । जस्तो प्रदेश नम्बर ६ मा १० भन्दा माथि हुनुपर्‍यो भने प्रदेश नम्बर २ मा ३२ को छेउछाउ हुनुपर्‍यो । यसका लागि क्षेत्रफललाई २० ले गुना गर्दा हुन्छ । यो विकल्पले जनसंख्यालाई ९० प्रतिशत र भूगोललाई १० प्रतिशत भार दिन्छ । भूगोललाई सम्बोधन गर्ने अर्को पक्ष पनि छ । प्रदेश नम्बर २ र ६ बाहेक अरु प्रदेशमा जनधनत्वमा खासै चर्को भिन्नता छैन । प्रदेशभित्र प्रवेश गरिसकेपछि जिल्लामा कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र दिने भनिएकाले पनि परोक्षा रुपमा भूगोललाई सम्बोधन गर्छ ।
१ ४५,३४,९४३ २५९०५ २८
२ ५४,०४,१४५ ९,६६१ ३२
३ ५५,२९,४५२ २०,३०० ३३
४ २३,९७,२७४ २१,८३८ १६
५ ४५,०५,९१४ १९,२२६ २७
६ १५,७०,२५७ ३०,७१२ १२
७ २५,५२,५१७ १९,५३९ १७
नोटः पूर्णांक बनाउन प्राय प्रयोग गरिने सेन्टलेग विधि प्रयोग गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।
यसो गर्दा प्रदेश नम्बर ६ ले १३ निर्वाचन क्षेत्र पायो । अन्तरिम संविधान अनुसार २४० स्थानीय तह हुँदा १५ थियो । जनसंख्या र भूगोललाई बराबर मान्दा २२ हुन्छ । हिजो देशभर २४० निर्वाचन क्षेत्र हुँदा १५ भइसकेकाले अहिले १६५ मा २२ हुनुपर्छ भन्नु उचित भएन । दुई तिहाईको अनुपात गर्दा १० हुन्छ । यो अनुचित हुन्छ भनेर नै जनसंख्यालाई मुख्य आधार मान्दा भूगोललाई दोस्रो आधार मान्नुपर्छ भनिएको हो । यसरी हेर्दा १२ पनि हो । प्रदेश नम्बर २ मा ३१/३२ हुँदा आनकातान फरक नपर्ने हुँदा हामीले यसको वरिपरि रहेर नै समाधान खोज्नुपर्छ ।
यसपछि जिल्लागत रुपमा निर्वाचन क्षेत्र विभाजन गर्नुपर्छ, यो धेरै हदसम्म सहज हुन्छ । किनभने ठूलो भूगोल, कम जनसंख्या भएका जिल्लाहरु मुख्यत प्रदेश नम्बर ६ मा र धेरै जनसंख्या, सानो भूगोल भएका जिल्लाहरु मुख्यतया प्रदेश नम्बर २ मा गुजुल्टिएर बसेका छन् । त्यसैले प्रदेशभित्र क्षेत्र विभाजनमा प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जस्तो कठिनाई हुने छैन । पहिले प्रदेशको संख्या टुंगो लगाऔं, जिल्लाको क्षेत्र निर्धारण सापेक्षिक रुपमा सहज हुनेछ ।
(कांग्रेस नेता डा. रिजालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
पशुपतिको जग्गा भाडाः प्रतिआना मासिक साढे नौ रुपैयाँ !
Thoughts On Methods For Order An Essay Online
The Options For Convenient College Paper Service Secrets
Exploring Effortless Solutions For Moscow Brides
Dissertation Writing Services vs. Freelancers
Real-World Advice Of South Africa Supplements – Some Insights
Consejos sobre de quA� forma llevar durante cabo una reuniA?n efectiva de el Junta | sala de juntas virtuales
Examining Simple Products In Russian Dating Sites
Main 11 HA�ufige Fehler beim Erstellen von seiten Webseiten
चीनले उत्तर कोरियाको सि फुड र फलाममा प्रतिबन्ध लगायो